ဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် By hook or by crook - Myanmar Network
ဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် By hook or by crook
Posted by Soe Soe Win on March 26, 2015 at 13:55 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
လောကမှာ ကိုယ်လိုချင်တာကို ရအောင်ယူမယ်ဆိုတဲ့ လူတွေဟာ စိတ်ဓါတ်မာကြောပြီး တစ်ခါတစ်လေ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တတ်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ကိစ္စတစ်ခုခုကို အောင်မြင်အောင် လုပ်ကို လုပ်ရမှ ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ အခါမျိုးတွေလည်း ကြုံဖူးကြမှာပါ။ အဲ့ဒီအခါမှာလည်း အောင်မြင်မှုကို ရဖို့ ဘာဘဲလုပ်ရလုပ်ရ၊ သည်းကြီးမည်းကြီး လုပ်ရပါတယ်။ ကိုယ့်အရှေ့က အတားအဆီးမှန်သမျှကိုလည်း ဖြိုလှဲပစ်ဖို့ အသင့်ပါဘဲ။ မြန်မာစကားမှာ လူတွေစုဝေးရာ ဈေးတွေ၊ လှေဆိပ်၊ လှည်းဆိပ်တွေမှာ ရှေးရှေးက ဝရမ်းပြေးဖမ်းဖို့ ကပ်လေ့ရှိတဲ့ Wanted ခေါ် အသေရရ အရှင်ရရ အလိုရှိသည် ဆိုတဲ့ ကိုလိုနီခေတ် အစိုးရကြော်ငြာကနေ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပုံရတဲ့ "အသေရရ၊ အရှင်ရရ" ဆိုတဲ့ ဘာကို မဆို မရမနေ လုပ်မယ်၊ ရအောင်ယူမယ်ဆိုတဲ့ အခုခေတ်သုံးစကားလည်း ရှိသေးတယ် မဟုတ်လား။
အင်္ဂလိပ်မှာ အဲ့ဒီစကားနဲ့ အလားတူတဲ့ စကားကတော့ by hook or by crook ဆိုတဲ့ စကားဖြစ်ပါတယ်။ By hook or by crook ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က တစ်စုံတစ်ခုကို နည်းလမ်းပေါင်းစုံသုံးပြီး မဖြစ်မနေလုပ်တယ် (တရားတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ဖြစ်စေ၊ မတရားတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ ဖြစ်စေ) လိုိ့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဒီစကားပေါ်လာခဲ့တဲ့တာကလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၄ ရာစုလောက်ကတည်းက Middle Age လို့ခေါ်တဲ့ခေတ်မှာ ထင်းခွေခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စည်းကမ်းချက်ကနေ စတင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ အဲ့ဒီခေတ်က တောင်သူလယ်သမားတွေဟာ မြေရှင် တော်ဝင်မျိုးနွယ်ဝင်တွေ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ သစ်တောတွေမှာ ထင်းခွေလိုတဲ့အခါ သစ်ပင်၊ သစ်ကိုင်းတွေကို စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ မခုတ်စေဘဲ သိုးကျောင်းသားတွေကိုင်တဲ့ crook လို့ခေါ်တဲ့ တုတ်ကောက်နဲ့ ခြောက်သွေ့နေတဲ့ သစ်ကိုင်းတွေကို သစ်ပင်ကနေ ချိုးယူနိုင်သလောက်သာ ယူခွင့်ရှိသလို၊ hook ခေါ် ပုပြတ်ပြတ် ဒါးကောက် (bill-hook လို့ ခေါ်တဲ့ တံစဉ်းလိုမျိုး) နဲ့ အကိုင်းတွေကို ချိုင်ယူနိုင်သလောက်သာ စည်းကမ်းနဲ့ ထင်းခုတ်ယူခွင့်ပြုတဲ့ by hook or by crook ဆိုတဲ့ စည်းကမ်းချက်ကနေ လာပါတယ်။ တစ်ဖက်ကနေကြည့်ရင် မီးရေး၊ ထင်းရေးဆိုတာကလည်း စားဝတ်နေရေးမှာ တစ်စိတ်တစ်ဒေသ အရေးကြီးတာမို့ ထင်းလိုချင်ရင် ဒီစည်းကမ်းကို မဖြစ်မနေလိုက်နာ ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း by hook or by crook က မဖြစ်မနေ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ဆောင်တာပေါ့နော်။ ဒီလိုနဲ့ ခေတ်ကာလ ရွေ့လျားလာတဲ့အခါ အဲ့ဒီစည်းကမ်းရှိတဲ့ by hook or by crook ကို ဘာဘဲလုပ်ရလုပ်ရ နည်းမျိုးစုံသုံးပြီး (မှားမှား၊ မှန်မှန်) မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်က လွှမ်းမိုးသွားခဲ့ပါပြီ။
By hook or by crook ရဲ့ ပေါ်ပေါက်လာပုံက ဟိုးရှေးရှေးကတည်းက ဆိုတော့ တစ်ချို့သော ပညာရှင်တွေ သုံးသပ်ထားတဲ့ ဒီစကားရဲ့ အခြားသော ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ စတင်ပေါ်ပေါက်လာပုံ အကြောင်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲက တစ်ခုကတော့ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Waterford ဆိုတဲ့ ဒေသအနီးမှာ ရှိတဲ့ ရွာနှစ်ရွာဖြစ်တဲ့ Hook Head နဲ့ Crooke ဆိုတဲ့ နာမည်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီရွာနှစ်ရွာက Waterford တူးမြောင်းရဲ့ တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာ မျက်နှာချင်းဆိုင် တည်ရှိပါတယ်။ ၁၆၄၉ ၊ ၅၀ လောက်က Cromwell ဆိုတဲ့ စစ်သူကြီးက အဲ့ဒီနားက ဒေသတွေကို သိမ်းပိုက်တဲ့အခါ သူ့ရဲ့ ရေတပ်တွေက Waterford တူးမြောင်းရဲ့ ဘယ်ဘက်ကမ်း Hook ဖက်အခြမ်း သို့မဟုတ် ညာဖက်ကမ်း Crooke ဖက်အခြမ်းမှာ ဆိုက်ကပ်ပြီး မြို့ကို ဝင်စီးမယ်လို့ by Hook or by Crooke (Crook) လို့ ပြောခဲ့ရာကနေ ပေါ်လာပုံရတယ်လို့လည်း ပြောကြပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ ၁၆၀၀ တစ်ဝိုက်ကာလကဘဲ အင်္ဂလိပ်တရားသူကြီး Sir George Croke က အဲ့ဒီခေတ် ရှင်ဘုရင် Charles ကပါလီမန်နဲ့ မတိုင်ပင်ဘဲ ရေကြောင်း အခွန်အခ ကောက်ခံဖို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ အမိန့်တော်ကို တရားဝင် ပြဌာန်းဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့ရာက အများကြည်ညိုခံပြီး နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီခေတ် လူတွေရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှာ "Ship money may be gotten by Hook (မတရား အဓမ္မ) but not by Croke." လို့ ပြောစမှတ်ပြုရတဲ့ အထိပါဘဲတဲ့။
ဒါပေမဲ့ ပညာရှင်အများစုရဲ့ အဆိုအရတော့ ပထမဆုံးဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ ထင်းခွေဥပဒေ ပမာကတော့ by hook or by crook ရဲ့ အဖြစ်နိုင်ဆုံး မြစ်ဖျားခံရာ ဖြစ်တယ်လို့ တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း ဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျား။
By hook or by crook အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များနှင့် ဥပမာများ
By any means necessary to accomplish the purpose; one way or another.
If you intend to do something by hook or by crook, you are determined not to let anything stop you doing it and are ready to use any methods.
I decided that I was going to get that job by hook or by crook. (ဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် အလုပ်ရအောင်ရှာမှဖြစ်မယ်)
This is because of the fact that there are certain companies which are driven by the motive of making money by hook or by crook and if that means cheating. (မရိုးသားတဲ့နည်းနဲ့ငွေရှာရရှာရ)
By hook or by crook, we were going to make this happen. (ဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရအောင်လုပ်ကြမယ်)
They are making money by hook or by crook. (ဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ငွေရှာတယ်)
Some people feel that they need to boost test scores by hook or by crook.
Court to Decide If He Won by Hook or by Crook Associated Press. (သတင်းစာခေါင်းစဉ်တစ်ခု)
By hook or by crook နဲ့ အလားသဏ္ဌာန် တူတဲ့ phrase တွေက one way or another / somehow or other / no matter how / no matter what / no matter what it takes ဖြစ်ပါတယ်။
Lock, stock & barrel: familiar sayings and their meanings ၊ Cambridge Idioms Dictionary 2nd ed., 2006 နှင့် Cambridge Dictionary of American Idioms, 2003 စာအုပ်တို့မှ ကိုးကားဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Permalink Reply by Htun Htun Soe on March 26, 2015 at 15:43
Permalink Reply by Khoon Hset Nay on March 31, 2015 at 13:20
Permalink Reply by Tharaphe Sein Mg on June 5, 2015 at 15:39
Permalink Reply by Wathone Oo on December 1, 2015 at 11:42
I've been listening to the song named "Little by Little" and I didn't get what it's said.
Now I got it and thank you very much for that :D :D :D